नेपालमा कोरोन फैलिएको खबर बाहिरिएपछि गृहमन्त्रालयले बल्ल निकाल्यो यस्तो कडा विज्ञप्ति, के हो यथार्थ ? — Sanchar Kendra
१कोरोना संक्रमणबाट उपमेयर चौधरीको मृत्यु
२सेयर बजारमा उत्साह कायमै, २७५९ बिन्दुको नयाँ रेकर्ड
३संक्रमण फैलिएपछि आजदेखि बनेपा ‘सिल’, मर्निङवाक जान समेत बन्द
४कोरोनाबिरु’द्ध लड्न अमेरिकाले गरिदियो यस्तो घोषणा
५प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहणविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
६एउटै स्कुलका ७ शिक्षिका एकसाथ गर्भवती, कारण सुन्दा सबै चकित (भिडियो सहित)
७बच्चाको तालुमा प्वाल देखेपछि आत्तिँदै अस्पताल, वास्तविकता खुल्दा बाउआमा लज्जित
८कोरोनाको तेस्रो लहर आए बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी जोखिम, विज्ञहरुले दिए यस्तो कडा चेतवानी
९इजरायल-प्यालेस्टाइन यु’द्ध- कुन देश कसको पक्षमा ?
१०श्रीमतीसंग डिभोर्स गरेका बिल गेट्सलाई आइलाग्यो यस्तो संकट, बेग्लै रहस्य खुलेपछि अमेरिकाभर तरंग
११भारतमा आएको शक्तिशाली चक्रवात ‘टाउ टेई’ को असर नेपालमा ५ दिन पर्ने
१२दुई मन्त्री र कांग्रेसका नेतासहित चार जना सिबिआईद्वारा पक्राउ, यस्तो छ कसुर
नेपालमा कोरोन फैलिएको खबर बाहिरिएपछि गृहमन्त्रालयले बल्ल निकाल्यो यस्तो कडा विज्ञप्ति, के हो यथार्थ ?
काठमाडौं । ‘कोरोनाभाइरस’ (कोभिड–१९) का विषयमा फैलिरहेको अनावश्यक भ्रममा नपर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । शनिबार विज्ञप्ति निकालेर गृह मन्त्रालयले भाइरसको संक्रमण नेपालमा अहिलेसम्म पुष्टि नभएकोले अनावश्यक हल्ला र प्रचारबाजीको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको हो ।
सरकारले संक्रमणबाट जोगिन उच्च सतर्कता अपनाएकोले अनावश्यक चिन्ता लिएर नबस्न पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव केदारनाथ शर्माले विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरेका छन् । यस्तै, मन्त्रालयले हल्लाको पछि लागेर उपभोग्य वस्तुको खरिद र भन्डारणमा कुनैपनि प्रकारको हतार नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
कसैले कालोबजारी, मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव गरेको पाइए तत्काल सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले डर पैदा गर्नेखालका काम गरिरहेको पाइएकोले तथ्यपरक सूचनामात्रै प्रवाह गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिएपछि सरकारले ठूलो सभा सभारोह, भेला तथा कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ । सरकार आफैंले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम स्थगित गरेको छ भने खेल प्रतियोगिताहरु समेत रोकिएका छन् ।
गृह मन्त्रालले होलीमा विगतमा जस्तो भेला हुने, लोलापानी हान्ने वा शरीरमा रंग तथा अविर नदल्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सन्निकट होलीमा विगतमा जस्तो भिडभाड, भेला जम्मा हुने, लोला पानी फ्याक्ने, शरीरमा रंग, अविर दल्ने कार्य पनि जोखिमपूर्ण हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु नगराउन अनुरोध छ ।’
गृहले कोरोनाको संक्रमण रोक्न उपभोग्य बस्तु खरिद तथा भण्डारणमा हतार नगर्न अपील गरेको छ । कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सार्वसाधारणले दैनिक उपभोग्य बस्तुका साथै ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले हतार नगर्न अपील गरेको हो । साथै कालोबजारी वा कृतिम अभाव गएको पाइए तत्काल सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले सीमानाकामा कोरोना भाइरसको ( कोभिड –१९ ) प्रभावकारी जाँच गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा बाँकेको जमुनाहकास्थित नेपाल–भारत सीमानाकामा सञ्चालित स्वास्थ्य सहायता कक्ष (हेल्थ डेस्क) को आज अवलोकन गर्दै उनले नेपाल प्रवेश गर्ने सबैमा जाँच गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आग्रह गरे ।
सो अवसरमा राज्यमन्त्री रावतले आफ्नो जाँचसमेत गरे । नाकाबाट आउने यात्रुकोे प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको सो उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए । स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बाहिरिने र भित्रिने हवाई यात्रुलाई लक्षित गरी परीक्षणकक्ष स्थापना गरिएको नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले खाद्यान्न तथा पेट्रोलियम पदार्थमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खोज्ने माथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज (शनिवार) आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री भट्टले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहुने जानकारी दिँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने माथि कारवाही गर्ने बताए । उनले भने, “सरकारले अहिले बजार अनुगमन एकीकृतरूपमा गरिएको छ । अपुग जनशक्ति अझै थप्ने तयारी छ ।”
साथै उनले वाणिज्य विभाग र औषधी विभागले एकीकृत रुपमा बजारको अनुगमन गरिरहेको पनि बताए । उनले भने, ‘अहिलेको जनशक्तिले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ । तर, अझै जनशक्ति थप्नेबारे कुरा पनि भएको छ । यसको लागि हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं ।’ भट्टले बजार व्यवस्थित, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय भैरहेको बताए ।
कोरोना भाइरसबारे पहिले नै गरिएको थियो यस्तो भविष्यवाणी, नयाँ खुलासाले विश्वभर हलचल
करिब आधा विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) का बारेमा के पहिले नै भविष्यवाणी गरिएको थियो ? साहित्यकारहरुले विभिन्न रोग तथा महामारीहरुको बारेमा आफ्ना कृतिमा समावेश गर्दै आएका छन् । चाहे त्यो आदिमकालमा लेखिएका साहित्य हुन् वा उत्तरआधुनिक कालमा । कतै न कतै भविष्यमा हुने खतरा र महामारीको प्रसंग कोट्याइएको भेटिन्छ ।
त्यसो भए के साहित्यरकारहरुले केही वर्षअघि नै अहिले महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबारेमा भविष्यवाणी गरेका थिए त? पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा केही वर्षअघि नै लेखिएको उपन्यासमा लेखिएझैँ नै अहिले चीनको वुहानबाट भाइरसको संक्रमण फैलिएको दाबी गरिएको छ। यहाँ ती दुई उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएका भाइरस र अहिले देखिएको भाइरसमा समानता छ/छैन भन्नेबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा बहस चलेको छ।
धेरैजसो समाचार पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा दुई लेखकले आफ्नो कृतिमा दशकअघि नै कोभिड–१९ महामारीको भविष्यवाणी गरेको दाबी गरेका छन्। पहिलो पुस्तक हो, सन् १९८१ मा अमेरिकी उपन्यासकार डिन कुन्जद्वारा लिखित साइन्स फिक्सन ‘द आइज अफ् डार्कनेस’। उपन्यासमा काल्पनिक रुपमा एउटा बायोलोजिकल विपन(जैविक हतियार) को चर्चा गरिएको छ। उपन्यासमा उक्त मानवनिर्मित भाइरसलाई ‘वुहान–४००’ नाम दिइएको छ। उपन्यासमा मानिसलाई मार्ने उद्देश्यले बनाइएको भनिएको उक्त भाइरसले अन्जानमै बालबालिकाको भने मानसिक क्षमताको वृद्धि गराइदिन्छ।
वुहानबाट सुरु भएको भाइरसलाई प्राविधिक रुपमा ‘सार्स–कोभ–२’ नाम दिइए पनि अहिले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस डिजिज २०१९) ले चिनिन्छ। अहिले फैलिएको भाइरस र उपन्यासमा चर्चा गरिएको भाइरसबीच समानता भनेको चिनियाँ सहर वुहान मात्रै हो। तर यसको सुरुवातका बारेमा भने समानता पाइँदैन। उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको काल्पनिक रोग वुहान सहरबाहिर रहेको प्रयोगशालामा तयार पारिन्छ। तर अहिले देखिएको भाइरस भने वुहान सहरबाटै सुरु भएको मानिएको छ। र अर्को कुरा, अहिलेसम्म यो भाइरस कृत्रिम रुपमा तयार पारिएको भन्ने कुनै प्रमाण फेला पारिएको छैन।
उपन्यासको वुहान–४०० र कोभिड–१९ मा अर्को पनि भिन्नता रहेको छ। उपन्यासमा यो भाइरसको संक्रमणपछि कोही पनि २४ घण्टाभन्दा बढी नबाँच्ने भनिएको छ। यो हिसाबमा यो रोगको मृत्युदर शतप्रतिशत पक्का हो भन्ने देखिन्छ। अहिले देखिएको भाइरसमा भने त्यो कुरा लागू हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोभिड–१९ को मृत्युदर ३.४ प्रतिशत मात्रै हो।
उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको भाइरस मान्छेमा मात्रै संक्रमण हुने र अन्य पशुपन्छीमा नहुने उल्लेख छ। तर कोभिड–१९ चमेरो हुँदै समुद्री जीवजन्तुबाट मान्छेमा सरेकोआँकलन गरिएको छ। कोभिड–१९ मुख्यतया श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो। तर उपन्यासमा भने भाइरसले सिधै मस्तिष्कमा आक्रमण गर्ने उल्लेख छ। यसले मस्तिष्कको कोषलाई ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने एसिडले एकदमै नरम कपडा (चीजक्लथ) लाई नष्ट गरेझैँ समाप्त पार्ने उपन्यासकारले कल्पना गरेका छन्।
तर यसमा छुटाउनै नहुने कुराचाहिँ ‘आइज अफ् डार्कनेस’ को पहिलो संस्करणको सन्दर्भ हो। सन् १९८१ प्रकाशित कुन्जको उपन्यासमा ‘वुहान–४००’ भाइरस नै उल्लेख नभएको साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टमा केट ह्वाइटहेडले दाबी गरेकी छिन्। पहिलो संस्करणमा उपन्यासकारले भाइरसको निर्माण तत्कालीन सोभियत संघको गोर्कीमा भएको उल्लेख गरेका छन्। गोर्की रुसको सानो गाउँ हो।
पहिलो संस्करणमा गोर्की–४०० भाइरस को चर्चा गरिएको छ। जसमा रुसी वैज्ञानिक इल्या पोपारोपवले गोर्की–४०० नामक जैविक हतियार बोकेर अमेरिका प्रवेश गरेको कुरा उल्लेख छ। उपन्यासमा लेखिएको छ, ‘…रुसी नागरिकले उक्त जैविक हतियारलाई गोर्की–४०० भन्ने गर्छन्। किनभने त्यो गोर्कीभन्दा बाहिरको ‘आरडीएनए’ ल्याबमा तयार पारिएको हो। यो अनुसन्धान केन्द्रमा तयार पारिएको मानवनिर्मित ४००औं सूक्ष्म जीव हो।’
अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच शीतयुद्ध चलिरहेका बेला उपन्यास लेखिएकाले उपन्यासकारले रुसले जैविक हतियार बनाउन सक्ने भन्दै उपन्यास लेखेको हुन सक्ने समीक्षक बताउँछन्। तर सोभियत संघको पतनपछि उपन्यासकारले उपन्यासको पुनर्लेखन गरेका हुन्। प्रकाशकको आग्रहमा वा आफैंले उपन्यासमा केही पात्र र कथावस्तु परिवर्तन गरे भन्नेबारे केही स्पष्ट छैन। साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टले यसबारे उपन्यासकार र प्रकाशकसँग बुझ्ने प्रयास गरे पनि जवाफ नआएको बताएको छ।
तर सन् १९८९ मा हार्डकभरमा पुनः प्रकाशित उपन्यासमा गोर्की–४०० को ठाउँमा वुहान–४०० भाइरस उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै रुसी वैज्ञानिक इल्या पोपारोपोवलाई चिनियाँ वैज्ञानिक ली चेन बनाइएको छ। उपन्यासमा गोर्कीलाई वुहान र इल्यालाई ली बनाउने काम बाहेक खासै अरु परिवर्तन गरिएको छैन। हङकङमा रहेको ब्लिक हाउस बुक्सकी संस्थापक जेनी स्मिथ सन् १९८६ बाट रुस र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गएपछि उपन्यासका पात्र र कथावस्तु परिवर्तन गरिएको हुन सक्ने बताउँछिन्। पछिल्लो विश्व राजनीतिक वातावरणअनुसार रुसलाई खलनायक बनाइराख्न उपयुक्त नहुने देखेर उपन्यासमा चीनलाई प्रस्तुत गरिएको स्मिथको बुझाइ छ।
त्यतिबेलाका शक्ति राष्ट्र फ्रान्स, बेलायत, जापानलगायतका मुलुकहरु अमेरिकाका ‘असल मित्र’ भएको र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो थिएन। त्यसैले पनि चीनलाई शंकाको दृष्टिकोणमा त्यसरी प्रस्तुत गरिएको हुन सक्ने स्मिथले साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टसँगको कुराकानीमा बताएकी छिन्। साथै सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको घटनापछि विभिन्न मुलुकहरुले जैविक हतियारको उत्पादनलगायतका हल्लाहरु चलेकाले पनि उपन्यासमा ठाउँ र नाउँ परिवर्तन गरिएको धेरैजसोको बुझाइ छ।
त्यस्तै कोरोना भाइरससँग जोडेर हेरिएको अर्को उपन्यास हो, सिल्भिया ब्राउनद्वारा सन् २००८ मा लिखित ‘इन्ड अफ् डेज : प्रेडिक्सन एन्ड प्रोफेसिज अबाउट द इन्ड अफ द् वर्ल्ड’। उपन्यासमा लेखिएको छ, ‘सन् २०२० तिर निमोनियाजस्तै गम्भीर रोग विश्वव्यापी रुपमा फैलिनेछ। जसले फोक्सो र श्वासनलीमा आक्रमण गर्नेछ। जसको उपचार सम्भव छैन।’ उपेन्द्रराज पाण्डेयले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट उपमेयर चौधरीको मृत्यु
कोरोनाबिरु’द्ध लड्न अमेरिकाले गरिदियो यस्तो घोषणा
प्रधानमन्त्री ओलीको शपथग्रहणविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
कोरोनाको तेस्रो लहर आए बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी जोखिम, विज्ञहरुले दिए यस्तो कडा चेतवानी
श्रीमतीसंग डिभोर्स गरेका बिल गेट्सलाई आइलाग्यो यस्तो संकट, बेग्लै रहस्य खुलेपछि अमेरिकाभर तरंग
भारतमा आएको शक्तिशाली चक्रवात ‘टाउ टेई’ को असर नेपालमा ५ दिन पर्ने
सर्वोच्चले ओली सरकारलाई बल्ल दियो यस्तो कडा आदेश
कोरोना महामारीकाबीच श’वले भरियो गंगा नदीको किनार, हरेक दिन बगेर आउँछन् ६०-७० शव